Rooble oo Madaxda Dowlad Goboleedyada kala hadlay arrimaha doorashooyinka | Dhacdo
Home Wararka Maanta Rooble oo Madaxda Dowlad Goboleedyada kala hadlay arrimaha doorashooyinka
Rooble oo Madaxda Dowlad Goboleedyada kala hadlay arrimaha doorashooyinka
War qoraala oo ka soo baxay Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha ee Magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in Ra’iisal Wasaaraha uu Madaxda Dowlad Goboleedyada uga warbixiyay xalinta khilaafka ka dhashay Guddiga Doorashada Gobolada Waqooyi.
Warka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Madaxda Dowlad Goboleedyada ay taageereen dadaalada Ra’iisal Wasaaraha ee lagu dhameystirayo dhismaha Guddoonka Guddigaas.
Warka ayaa u qornaa “Kulan foggaan arag ah oo ay caawa yeesheen Madaxda Golaha Wadatashiga Qaranka, uuna shir guddoominayay Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa looga wadahadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka dalka.
Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa golaha uga warbixiyay halka ay mareyso xalinta khilaafka ka taagan doorashada Hoggaanka Guddiga Maamulka Doorashada Gobolada Woqooyi ee Somaliland, iyadoo goluhu si buuxda u taageeray dadaalada Ra’iisal Wasaaraha ee lagu dhameystirayo dhismaha Guddoonka Guddiga Maamulka Doorashooyinka Somaliland, oo maanta uu Ra’iisul Wasaaruhu ku wargeliyay Xubnaha Gudigaas in ay si deg deg ah isaga dhex doortaan hoggaankooda.”
Previous articleDad badan oo xanuunka COVID-19 ugu geeriyooday Magaalada Muqdisho
Next articleGuddiga Doorashada Galmudug ee Aqalka Sare oo hoggaan doortay